प्रिन्ट संस्करण - नयाँ वर्षको नयाँ संकल्प - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
नयाँ वर्षको नयाँ संकल्प
- जगदीश्वर पाण्डे
वैशाख २, २०७४-भनिन्छ, हरेक नयाँ दिन जिन्दगीको नयाँ सुरुआत हो । प्रत्येक बिहानीबाट नयाँ जोश र जाँगरका साथ अघि बढ्नुपर्छ । धेरैले भनेका छन्, जिन्दगी एक दौड हो । दौडमा घुम्ती आएजस्तै जिन्दगीमा पनि पटक–पटक त्यस्तै घुम्ती घमाउरा बाटा आउँछन्, जहाँ आवश्यकताअनुसार ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्छ । र, फेरि गति लिनुपर्छ ।
जीवनको यस्तै गतिलाई आवश्यकताअनुसार ‘ब्रेक’ लगाउने र नयाँ गतिका साथ अघि बढ्ने संकल्प गर्ने क्षण हो नयाँ वर्षको नयाँ दिन । इस्वी संवत् होस् या विक्रम संवत्, नयाँ वर्षको आगमनसँग अधिकांश मानिस आगामी दिनका लागि केही विशेष संकल्प गर्न थाल्छन् । चाहे त्यो धूम्रपान छाड्ने साना व्यक्तिगत कुरा हुन् या मुलुककै विकासमा लागि पर्ने प्रण । ‘न्यू इयर्स रिजोलुसन’ नेपाली र त्यो पनि सहरी युवाहरूबीच नयाँ संस्कृतिकै रूपमा व्यापक हुँदै छ । समाजशास्त्री सुरेश ढकालका अनुसार यसलाई प्रचलित पूर्वीय परम्परामा रहेको संकल्प वा प्रतिज्ञाको आधुनिक स्वरूप वा संस्करण भन्दा हुन्छ । सबै संस्कृति, परम्परामा यस्तो प्रचलन पाइन्छ । हासिल गरिएका सफलताहरूमा सन्तुष्ट हुन नसक्दा वा स्वयंको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट हुँदा नयाँ केही गर्न वा व्यवहार परिवर्तन गर्न यस्तो संकल्प गरिने ढकालको ठम्याइ छ । यस्ता संकल्पहरूको तहलाई अवसरहरूको उपलब्धताले निर्धारण गर्छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, नयाँ वर्ष २०७४ का लागि फरक–फरक चार क्षेत्रका व्यक्तिहरूको संकल्प के छ ? उनीहरू आमनेपालीलाई के संकल्प लिन सल्लाह दिन्छन् ?
‘विकास र आर्थिक मुद्दामा थप लाग्छु’
स्वभावले नै नयाँ वर्ष भन्नेबित्तिकै आफ्नो केही परिवर्तन गर्ने भन्ने हुन्छ । नकारात्मक सोचलाई हटाउने भन्ने हुन्छ । म पनि नकारात्मक सोचलाई हटाउन चाहन्छु ।
दोस्रो, विकासको इस्युमा अझ बढी लाग्ने संकल्प गरेको छु । साथमा आर्थिक विकासमा पनि अझ बढी मिहिनेत गरेर जनतालाई सहज वातावरण सिर्जन गर्न चाहन्छु । जनप्रतिनिधि, समिति (संसद्को विकास समिति) को सभापति, जनतासँगको अन्तरक्रिया पार्टीको कामले गर्दा पढ्न र घरमा कम समय दिएको छु । पढ्ने समय बढाएर आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउने कोसिस गर्नेछु । आफ्नै देशका विभिन्न स्थलमा अझै पुग्न भ्याएको छैन । देशका विभिन्न स्थालमा पुग्ने, त्यहाँको आर्थिक, भौतिक विकासको अवस्था हेर्ने, जनतासँग अन्तरक्रिया गरेर अघि कसरी बढ्ने भन्ने योजना बनाएको छु । घर परिवारलाई पनि समय कम दिंदै आइरहेको छु, यो वर्षचाहिं थप समय दिने संकल्न गरेको छु ।
मुलुकको राजनीतिमा आशाका किरणहरू छन् । तर धेरै राम्रो पनि देखेको छैन । हाम्रोमा नियमहरू अपवाद र अपवादहरू नियम हुन थालेका छन् । नियमलाई अपवादको रूपमा लागू गर्ने र अपवादलाई नियमको रूपमा लागू गरेर समस्याको सिर्जना भएका छन् । सियो छिर्छ भनेर हात्ती पनि छिराउने काम भएका छन् ।
यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हो । तीन (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) निर्वाचन गर्नुपर्छ । यी निर्वाचन भएन भने डरलाग्दो वर्ष हो । त्यसैले यो अवसर र चुनौती दुवै वर्ष हो । निर्वाचनलाई हामीले सही रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तादेखि मलाई डर लागेको छ । नेताकापछि दौडनेभन्दा पनि उनीहरूलाई बलियो र सक्षम हुनलाई अग्रसर गर्नु आवश्यक छ । युवाहरूलाई अहिले छोटो समयका लागि फाइदा होला तर दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हँुदैन । नेतृत्व लिन सक्ने मान्छेलाई अघि ल्याउनुपर्छ । म कहाँ कति रहन्छु भन्दा पनि आफूले के दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । यो वर्ष व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर काम गरून् भन्ने मेरो संकल्प छ ।
‘आफैंलाई अझै चिन्ने प्रयत्न गर्न सकूँ’
मेरो रुचि र पेसा पठनपाठन भएका कारण म विगत केही वर्षदेखि एउटा असन्तुष्टिसँग गुज्रिरहेको छु । त्यो भनेको पर्याप्त लेखन, प्रकाशन गर्न नसक्नुको असन्तुष्टि हो, आफैंप्रतिको । संयोग नयाँ वर्षको परेको छ, यसलाई मेरो नयाँ वर्षको संकल्प पनि भन्न सकिन्छ । आगामी वर्षमा केही प्राज्ञिक लेखन र पपुलर लेखनमार्फत मेरा आफ्नै असन्तुष्टिहरू कम गर्ने प्रयास हुनेछ । बितेको वर्षभन्दा आगामी वर्ष आफ्नै रुचि र पेसाप्रति अलि बढी प्रतिबद्ध हुने नै मेरो नयाँ वर्षको घोषित संकल्प हो ।
राजनीतिक नेता, दलहरू र केही संस्थाहरू पनि यस्ता थुप्रै प्रतिबद्धता गर्छन् र पूरा गर्दैनन् तसर्थ सामूहिक, संस्थागत प्रतिबद्धता अपेक्षा नै गरिंदैन । तर सामूहिक प्रतिबद्धता, सामूहिक संकल्प, सामूहिक प्रयत्न धेरै अर्थमा आवश्यक हुन्छन् । यो वर्ष तीन चुनाव हुनेछन् । राजनीतिक दलहरूले चुनावको सन्दर्भमा हिंसालाई निरुत्साहित गरुन् । चुनावी विवादलाई समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउन् ।
सञ्चार संस्थाहरूले सनसनीपूर्ण समाचारभन्दा सक्रंमणलाई बल पुग्ने समाचारहरूमा जोड गरून्, आवश्यक परे पत्रकार महासंघजस्ता संस्थाले श्वेतपत्र जारी गरून् सामूहिक प्रतिबद्धतासहितको । प्रहरीजस्ता संस्थाहरू जनताको अझै निकट पुगून् र थप विश्वास जितून्, त्यसले जनजीवनलाई सहज बनाउँछ जनतामा सुरक्षा भावले मात्र पनि ।
विद्यार्थी संगठनहरू र युवा संगठनहरू ऊर्जाशील समूहको नेतृत्व गर्छन् । उनीहरूले मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिने, समाजको सामूहिक हित गर्ने कुनै सिर्जनात्मक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरून् । त्यस्ता संगठनका प्रत्येक सदस्यहरूले वर्षको निश्चित दिन स्वयंसेवा गर्नुपर्ने प्रचलनको थालनी गरून् । यसले उनीहरूको खस्किँदो ‘इमेज’ लाई सुधार्न पनि मद्दत गर्छ भने कुनै क्षेत्रमा केही न केही योगदान गर्नेछ ।
व्यक्ति होस् या संस्था जीवनमा केही न केही परिवर्तन गर्ने सकारात्मक सोच र आशा व्यक्तिगत र सामूहिक उन्नति, समृद्धि र सुसंस्कारका लागि आवश्यक पर्छन् । आफूले आफैंलाई अनुशासित गर्ने र जीवन अझै सार्थक बनाउने कुरासँग जोडिन्छन् । यी र यस्ता प्रचलनहरू, आफैंलाई झनै राम्रोसँग चिन्ने प्रयत्न गर्न सकूँ ।
रबिना देशराज श्रेष्ठ
‘स्वास्थ्य र सेवामा समय बढाउँछु’
अहिले उमेर पनि बढ्दै गयो । वातावरण पनि ख्याल गर्दा मैले यो वर्ष स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिन्छु । म आफूलाई माया गर्ने मान्छे हो । नियमित अभ्यास गर्ने, बिहान योगा गर्ने र तीन–तीन घण्टामा खाने गर्छु । काममा व्यस्त भइन्छ । त्यसैले पनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ ।
मेरो दोस्रो संकल्प अरूलाई अझ बढी सहयोग गर्ने रहको छ । मैले अहिलेसम्म जुन कुरा सिकेको छु, त्यो अरूलाई पनि बाँड्छु, कार्यशाला होस् या कार्यक्रम वा व्यक्ति–व्यक्तिबीचको कुराकानीमा । ‘रोमान्स’ देखि ‘जेन्डर इमोसन ब्यालेन्स’ सम्मका आफूलाई थाहा भएका कुरा अरूसँग सेयर गर्छु । यसर्थ यो वर्ष मेरो प्राथमिकता जनताको सेवा गर्ने रहेको छ, त्यसमा पनि विशेषगरी युवाहरूलाई ।
व्यक्तिगत जिन्दगीमा पनि सवल बन्नुपर्छ । तर अरूलाई सहयोग गर्न सके राम्रो हुन्छ । म यो वर्ष पहिलेभन्दा बढी अरूलाई सेवा गर्नप्रति समर्पित हुनेछु । नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रले आपसमा मिलेर अझ काम गर्नुपर्छ ।
सरकारसँग मिलेर निजी क्षेत्रले जनताका लागि काम गर्न सक्छौं । हाम्रो देशबाट व्यक्तिहरू पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई यही नै व्यापार गर्न सक्ने र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिए विदेशमा काम गर्न जानु पर्दैन थियो । एउटा बैंकरको हैसियतले आफूले सक्ने जति यसतर्फ पाइला चाल्नेछु ।
‘नेपाली साहित्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अघि बढेको हेर्न चाहन्छु’
व्यक्तिगत रूपमा नयाँ वर्षमा म आफ्नो लेखनबाट पाठकहरूमा मन थप जित्न चाहन्छु । त्यसैको लागि मिहिनेत गरिरहनेछु ।
नेपाली आख्यान साहित्यलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ, ‘पल्पसा क्याफे’ अघि र पछि । ‘पल्पसा क्याफे’ अघि प्रकाशनमा साझा प्रकाशन अग्रपंक्तिमा थियो, जसले पहिलो संस्करण एक हजारप्रति छाप्थ्यो । र, यदि पुस्तक बिक्री भयो भने अर्को वर्ष अर्को संस्करण छापिन्थ्यो । दोस्रो संस्करणको अनुहार देख्ने पुस्तक स्थापित भइहाल्थ्यो । निजी क्षेत्रमा रत्नपुस्तक भण्डार अग्रपंक्तिमा थियो । प्रकाशक नेपालयका अनुसार पल्पसा क्याफेले ५० हजारप्रतिभन्दा बढी बिकेर कीर्तिमान कायम गरेको छ । पल्पसा क्याफे प्रकाशन भएको १२ वर्षपछि, हरिवंश आचार्यको ‘चिना हराएको मान्छे’ ले ७० हजार प्रतिभन्दा बढी बिकेर अर्को कीर्तिमान कायम गरेको छ । ‘चिना हराएको मान्छे’ आख्यान होइन तर नेपाली आख्यानका लागि यो पुस्तकले बेन्चमार्क खडा गरिएको छ ।
र, अहिले प्रकाशन संस्थाहरू मौलाएका छन्, जो व्यावसायिक छन् र धेरै लेखकलाई पूर्णकालीन लेखक हुने आँट दिइरहेका छन् । फाइनप्रिन्ट, साङ्ग्रिला, बुकहिल, फिनिक्सजस्ता प्रकाशन संस्था अग्रपंक्तिमा छन्, जसले पुस्तकको आवरण र डिजाइनलाई पनि महत्त्व दिइरहेका छन् । डा. तारालाल श्रेष्ठका अनुसार ‘यसो बटारेर झट्कार्दा झर्‍याम्म अक्षरहरू खस्लान्जस्ता’ किताबहरू छापिने जमाना सकिएका छन् ।
अचेल गृहिणी, पसलेदेखि स्कुले विद्यार्थीसम्मले नेपाली साहित्य पढेको र पुस्तकका बारेमा कुरा गरेको देख्न सकिन्छ । इन्टरनेटको आगमन (फेसबुक, ट्वीटरदेखि गुडरिड्स आदि) ले विजयकुमारका शब्दमा ‘नेपाली साहित्यबाट बिचौलियाहरू’ हराउँदै गएका छन् । जो पुस्तकको विशिष्टता र अशिष्टता मापन यन्त्र बोकेर बसेका हुन्थे । त्यसरी नै पुस्तकबाट ‘भूमिका’ नामको उच्चाट लाग्दो विधा पनि हराएको छ । अहिले नेपाली पाठकहरूले आफ्नो टेस्टका पुस्तकहरू खोज्ने सुविधा पाएका छन् । आफ्नो समुदाय, आफ्नो जरा र आफ्नो विशिष्टताका बारेमा लेख्न हरेक समुदायबाट लेखकहरू उदाइरहेका छन् । त्यही साँघुरोपनबाट आख्यानको विशिष्टता बढ्दै जान्छ । प्रा.डीपी भण्डारीले ‘विषय त कुकुरको पुच्छर पनि हुन सक्छ तर त्यसलाई भन्ने शैली महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ’ भने जसरी, अहिलेका लेखकहरूले कथालाई मात्र होइन, शैलीलाई पनि महत्त्व दिन थालेका छन् ।
त्यसैगरी बाहिरी अन्य भाषाका प्रकाशन संस्थाहरू पनि नेपाली साहित्यमा चासो दिइरहेका छन् । भर्खरै लन्डनको प्रकाशन संस्था हेड अफ जुसले ‘हाउस अफ स्नो’ नामको पुस्तक प्रकाशन गरेको छ, जसमा ५० नेपाली (अनुवाद र मौलिक) लेखकका पुस्तक अंशहरू राखिएका छन् । लेखक प्रवीण अधिकारीका अनुसार अघिल्लो वर्ष बुकर इन्टरनेसनल पुरस्कार प्राप्त ‘द भेजिटेरियन’ की अनुवादक डेबरा स्मिथ नेपाली लेखकले सहरी जीवनमाथि लेखेको पुस्तक प्रकाशन गर्न चाहन्छिन् । त्यसैगरी अर्को प्रकाशन संस्था स्पिकिङ टाइगरले नयनराज पाण्डेको ‘लू’ र ‘मेरो कर्नाली ब्लुज’ अंग्रेजीमा प्रकाशन गर्दै छ । डायमनशमशेर राणाको ‘सेतो बाघ’, नारायण वाग्लेको ‘पल्पसा क्याफे’ पछि कर्नाली ब्लुज पनि यसै वर्ष कोरियन भाषामा प्रकाशन हुँदै छ— सोलबाट । अन्य आसलाग्दा समाचारहरू पनि केही वर्षमा सुनिने वातावरण बन्दै गइरहेको छ । यो वर्ष नेपाली साहित्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अघि बढेको हेर्न चाहन्छु ।
त्यसैले म अबको दस वर्षमा नेपाली लेखनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो मौलिक अनुहार निर्माण गर्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
प्रकाशित: वैशाख २, २०७४
कर फछ्र्योट भन्दै २१ अर्ब ‘लुट’ ›
‘जुम्मा चुम्मा दे दे...मंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
खाली प्यारापिटको अर्थमंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
इटालीमा ‘प्रलय’ मंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
संवेदनाको गोदावरीमंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
उखान सिद्धान्तको इतिवृत्तान्त मंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
निरंकुशतन्त्रका पाठहरूमंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
बालबालिका र स्मार्टफोन मंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
जीवनको वासनामंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
पुर्वै घुमेर...मंसिर २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्